Puerto Rico will be open for travelers on July 15 | Puerto Rico
ပင်မစာမျက်နှာ » ရေးသားချက်များ » နိုင်ငံတကာ itor ည့်သည်သတင်း » Puerto Rico » Puerto Rico သည်ဇူလိုင် ၁၅ ရက်တွင်ခရီးသွားများအတွက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်
Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • အစိုးရရေးရာ • Industry ည့်ဝတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းသတင်းများ • နိုင်ငံတကာ itor ည့်သည်သတင်း • အခြား • သတင်းများပြုလုပ်ခြင်း • Puerto Rico • ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း • တာဝန်သိခရီးသွားသတင်း • လုံခွုံမှု • ခရီးသွားသတင်း • ခရီးသွား Destination Update ကို • ခရီးသွားသတင်းများ • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • လူကြိုက်ရေစီးကြောင်းသတင်းများ
Puerto Rico သည်ဇူလိုင် ၁၅ ရက်တွင်ခရီးသွားများအတွက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်
Puerto Rico Wanda ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Garced
Puerto Rico Wanda ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှမကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်းယခုအပတ်သည် ၃ ခု၏အစဖြစ်သည်။rd အမေရိကန်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်စီးပွားရေးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအဆင့်နှင့်အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်၎င်း၏ရှေ့တန်းမှဖြစ်သည်။ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်မှစ၍ လုပ်ငန်းရှင်များသည်ကျွန်း၏သဘာဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအရင်းအမြစ်များကိုချက်ချင်းထိရောက်စွာခံစားနိုင်စေရန်ဒေသခံများအားဖိတ်ကြားခြင်းခံရကြောင်းကြေငြာချက်ကမီးမောင်းထိုးပြသည်။th ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်တင်းကျပ်သောကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူ Covid-19.
လတ်တလောတွင်ခရီးသွား's ည့်သည်များ၏ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ခရီးသွား locations ည့်သည်များသည်ကျွန်းသားများအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ၎င်းသည်သဘာဝအလှအပနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ of ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုကိုအချို့သောကန့်သတ်ချက်များဖြင့်ခံစားနိုင်သည်။ Puerto Rico ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိဟိုတယ်များသည်တစ်ခန်းလုံးဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကတင်ထားသော update နှင့်အတူ၊ ဟိုတယ်အတွင်းရှိရေကန်များ၊ အရက်ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်စျေးဆိုင်များကဲ့သို့သောဘုံနှင့်စီးပွားရေးနေရာများသည်လူမှုရေးအကွာအဝေးကိုမြှင့်တင်ရန်စွမ်းရည် ၅၀% နှုန်းဖြင့်လည်ပတ်နိုင်ကြသည်။ ဤအဆင့်တွင်ခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်များနှင့်လူကြိုက်များသောနေရာများကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများငှားရမ်းသည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လည်းသူတို့၏လုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်ရန်အခွင့်အာဏာရှိသည်။
မတ်လလယ်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏အမိန့်သည်ကျွန်းတစ်လျှောက်လုံးပိတ်ဆို့ခြင်းကိုပြenfor္ဌာန်းသည့်အခါခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးခရီးကိုလွန်ခဲ့သောရက် ၉၀ ကစတင်ခဲ့သည်။ Puerto Rico သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် COVID-90 ရောဂါကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ကျွန်း၏ကျန်းမာရေးစနစ်ပြိုလဲခြင်းကိုတားဆီးရန်အတွက်ညမထွက်ရအမိန့်ကိုပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Puerto Rico ၏အစိုးရ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အပြင်းထန်ဆုံးသောတုံ့ပြန်မှုများအနက်ကျယ်ပြန့်စွာအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရပြီး COVID-19 ကူးစက်မှုနှင့်သေဆုံးမှုနှုန်းမှာနိုင်ငံအတွင်းအနိမ့်ဆုံးအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။
ကျွန်းသည်ဒေသခံများနှင့် visitors ည့်သည်အားလုံး၏ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ Puerto Rico Tourism Company (PRTC) သည်အစိုးရ၏ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာနဖြစ်သည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအားလုံးသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းမစတင်မီတွင်လိုက်နာရမည့်တိကျသောစံနှုန်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲပြီးအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ Tourism Health and Safety Program ကိုမေလ ၅ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်thPuerto Rico သည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအားလုံး၏ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားရေးအတွက်အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောလမ်းညွှန်များကိုထုတ်ပြန်သည့်ပထမဆုံးခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရွှေစံနှုန်းကိုရည်မှန်းလိုကြောင်းပြောသောအခါ၎င်းကိုဆိုလိုသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးသည်ဤပြည့်စုံသောအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သောလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမည်။ နောက်လေးလအတွင်း PRTC သည်ဟိုတယ်နှင့်အော်ပရေတာ ၃၅၀ ကျော်အားစစ်ဆေးပြီးထိုစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီရမည်။ Puerto Rico ၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသောခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူဤအစီအမံများမှရရှိသောအာမခံချက်များနှင့်လုံခြုံရေးများသည်ကျွန်း၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်ရေတိုရေရှည်တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ အဆိုပါ PRTC, Carla Campos ။
လုံခြုံစိတ်ချရသောအတွေ့အကြုံသည်ဆိုက်ရောက်ချိန်တွင်စတင်သည်။ Luis MuñozMarínအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် (SJU / LMM), ကျွန်း၏အဓိကလေဆိပ်သည် Puerto Rico National Guard နှင့် ပူးပေါင်း၍ ၀ င်လာသည့်ခရီးသွားများအပူချိန်ကိုအလိုအလျောက်တိုင်းတာရန်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများကိုလျင်မြန်စွာစီမံရန် ၀ န်ထမ်းများရှိသည်။ ကျွန်းမှရောက်ရှိလာသောခရီးသည်ရန်။ အခမဲ့နှင့်ဆန္ဒအလျောက် COVID-19 စမ်းသပ်ခြင်းကိုလည်း site ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အခြားကာရစ်ဘီယံနေရာများနှင့်မတူဘဲလေဆိပ်သည်ပွင့်လင်းနေဆဲဖြစ်ပြီး Puerto Rico သည်၎င်း၏နယ်စပ်များကိုမပိတ်နိုင်သေးပါ။ လက်ရှိတွင် Puerto Rico သည်ကုန်တင်ခြင်း၊ ခရီးသည်နှင့်အထွေထွေလေကြောင်းပျံသန်းမှုများပါ ၀ င်သည့်နေ့စဉ်လုပ်ငန်း ၂၀၀ ခန့်ကိုစီမံခန့်ခွဲသည်။
Puerto Rico အစိုးရသည်ဇူလိုင် ၁၅ ရက်နှင့်အပြီးတွင် COVID-14 စစ်ဆေးမှု၏သက်သေအထောက်အထားကိုပြသသောခရီးသည်များအတွက်မဖြစ်မနေ ၁၄ ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက်ချွင်းချက်အားလုပ်ဆောင်နေသည်။ Puerto Rico သည်ခရီးသွား hosting ည့်သည်များကိုလက်ခံရန်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ဤလိုအပ်ချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောနောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလာမည့်နေ့ရက်များတွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။
လာမည့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်စတင်မည်ကိုကြေငြာခြင်းဖြင့်ကျွန်း၏ ဦး တည်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့အစည်း (Puo Rico) ကိုရှာဖွေခြင်းကိုသူတို့၏မြှင့်တင်ရေးကြိုးပမ်းမှုများအားပြန်လည်သက်တမ်းတိုးစေနိုင်သည်။ DPR ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဘရက်ဒင်းက“ ခရီးသွားများသည်လာမည့်အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောအတွေ့အကြုံကိုအာမခံပေးနိုင်သည့်ကမ်းခြေများနှင့်ကျေးလက်ဒေသများကိုရှာဖွေနေကြသည်ဟုသုတေသနကဖော်ပြသည်။ Puerto Rico သည်ထူးခြားသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ထူးခြားဆန်းပြားသောအတွေ့အကြုံများနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မလိုအပ်သောကြောင့်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။ Discover Puerto Rico သည် Puerto Rico ကိုစားသုံးသူများ၏ထိပ်ဆုံးနေရာတွင်ထားရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်မှစပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူတို့အားသူတို့အိပ်မက်မက်နေသောအားလပ်ရက်များကိုပေးနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ”
PRTC ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Carla Campos က Island ည့်သည်များအနေဖြင့်ကျွန်း၏သဘာဝအလှအပများ၊ နှစ်သက်ဖွယ်ရာများနှင့်သာယာအဆင်ပြေမှုများအားလုံးကိုခံစားခွင့်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာရွေးချယ်နိုင်မည့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောအစီအမံသစ်များကိုဇူလိုင် ၁ ရက်မတိုင်မှီသို့မဟုတ်ကြေငြာမည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်st.
COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းရှိလူများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အကောင်အထည်ဖော်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုလိုက်နာရန်ကြိုတင်စီစဉ်ထားရန်နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးVázquez Garced ကခရီးသွားများအားလာမည့်အားလပ်ရက်များကိုကြိုတင်စီစဉ်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။